साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी दुई चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)मा बन्ने सुरुङमार्गसहितका विशेष पुल निर्माण गर्न नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग शुक्रवार ठेक्का सम्झौता गरेको छ । रू. ५० अर्ब १४ करोड लगानीमा साढे ३ वर्षभित्र सुरुङमार्गसहितका विशेषखालका पुल निर्माण गर्न सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
तर, कुनै पनि निकायबाट परिपत्र नआएपछि साविककै कार्यतालिका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ । चैत १९ गते समितिले मन्त्रालयमार्फत सेनालाई दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कुनै निर्देशन नदिएपछि सेनाले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव वैशाख १२ गते स्वीकृत गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिको ३ दिनपछि समितिले सीधै नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेर पुनः प्रक्रिया रद्द गरी जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो ।
समिति–मन्त्रालय–सेनाबीच देखिएको मतभेद तथा विवादकै बीचमा सेनाले कानूनी बाध्यता, सार्वजनिक ऐन र नियमावली अनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । द्रुतमार्गमा बन्ने सुरुङमार्गसहितका ती पुलको पहिलो प्याकेजको लागत २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो प्याकेजको लागत २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले ठेक्का सम्झौताअनुसार ६ महीना डिजाइन र त्यसपछिको ३ वर्षभित्र ती कम्पनीले सुरुङमार्ग/पुल निर्माण गरिसक्ने जानकारी दिए ।
खरीद प्रक्रिया कानूनअनुसार नै ७ दिनभित्र उजुरी दिन भनिए पनि कुनै कम्पनीबाट उजुरी नआएपछि ती कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ समितिलाई सीधै पत्राचार पठाउन नमिल्ने र मन्त्रालयमार्फत जवाफ पठाइएको भए पनि कुनै जानकारी नआएपछि कार्यतालिका नरोकी ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले उल्लेख गरे । निर्माण अघि बढाउन ढिलाइ हुँदा अर्बाैं नोक्सान हुने र प्राविधिक रूपमा पनि सुरुङमार्ग र पुल एकआपसमा जोडिएकाले सँगै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सेनाको भनाइ छ ।
यस्तै सेना सम्बद्ध स्रोतका अनुुसार अहिले खरीद प्रक्रिया रद्द गर्दा नयाँ मूल्यअनुसार लागतसहितको टेण्डर बनाउनु पर्ने हुँदा लागत अनुमान नै बढ्ने, पुनः खरीद प्रक्रियामा जाँदा अहिलेको समय पनि खेर जाने र अर्काे एक वर्ष प्रक्रियामै बित्ने हुँदा निर्धारित समयमै फाष्ट ट्र्याकको काम बन्न सक्दैन । सार्वजनिक ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पालना गरी पूर्णरूपमा पारदर्शी रूपमा ठेक्का अघि बढाइएकोले रोक्न नहुने स्रोतको दाबी छ ।
सेनाका अनुसार पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ । अर्काे छोक्रेडाँडा–धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनले निर्माण गर्नेछ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी) लामो उक्त द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिलता र बढी लागत यी संरचना निर्माणमा हुनेछ । उक्त द्रुतमार्गमा विभिन्न तीन स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन् । साथै १६ ओटा जटिलखाले पुल पनि बन्नेछन् ।
द्रुतमार्गमा सुरुङमार्गको दूरी ६ दशमलव ४१ किमी रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी रहेको छ । ती कम्पनीले सुरुङमार्गसहित यी पुल पनि निर्माण गर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाको कुल लागत भने रू. १ खर्ब ७५ करोड छ । सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र द्रुतमार्ग बनाउनेगरी नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि मात्रै द्रुतमार्गका जटिल र मुख्य संरचना निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
[May 16, 2021 10:48am]
धेरै खुशी लाग्यो अलि अलि आश लाग्यो अब चही बन्छ कि